Umnikezeli wakho othembekileyo weLaser Cutter, izisombululo zeLaser yobuchwephesha
Yenza lula i-Sublimation Production
>> Phonononga ngakumbi
Izinto Zakho Eziprintiweyo
Umsiki weLaser yeFomati enkulu
Ngaphakathi kwe-3.2 yeemitha ububanzi
Ikamva leLaser Cutting
IMimoWork igxile ekuyileni izisombululo zelaser zokusetyenzwa kwemathiriyeli engeyiyo eyentsimbi kwicandelo lentengiso, iimoto kunye nenqwelomoya, ifashoni kunye nesinxibo, ushicilelo lwedijithali, umzi-mveliso welaphu lokucoca, njl.
Sinikezela ngoomatshini bokusika obukhethekileyo kunye nabakhethekileyo be-laser kwiintlobo zeemfuno zokwandisa ukusebenza kwabathengi bethu kunye nemveliso.
IContour Laser Cutter 160L
Eyona ndlela ilula yokusika kwiimveliso ze-sublimation yedayi.
Ubhaqo oluchanekileyo lwesishwankathelo secontour kunye nokusika okuchanekileyo kwecontour yayo nayiphi na ipateni kunye nokumila.
Ukusebenza okuphezulu kunye nokuhamba okuphezulu kokutya, ukuthatha imifanekiso kunye nokusika i-contour.
Ingcaphephe yezinto eziguquguqukayo zokusika.
Nakuphi na ukugqwethwa okanye ukolulwa kunokuqatshelwa yiMimo Contour Recognition System kunye neziqwenga eziprintiweyo ziya kusikwa ngobukhulu obuchanekileyo kunye nokumila.
Uyilo lomzimba olufakwe ngokupheleleyo lumisela isiqinisekiso sokhuseleko kwimveliso yokusika
Idityaniswe ngesantya esiphezulu, ukusebenza okuthembekileyo, kunye neempawu ezifanelekileyo, ukusetyenzwa okuguquguqukayo komyalelo ngamnye.
Owona matshini wokungena kwinqanaba lezinto eziqinileyo zofomathi enkulu.
I-R&D yokulungisa i-acrylic kunye neenkuni.
Ivumela ukhuphelo kunye nokulayisha okungathintelwanga.
Isantya esiphezulu kunye nokusika ngokuchanekileyo.
Ukukhetha okungenakulinganiswa kokusikwa kwezinto eziguquguqukayo.
Iintloko ezimbini ze-laser ezihamba ngokuzimeleyo, kabini ukusebenza kwakho kakuhle (ukhetho).
I-Nesting Software igcina izixhobo zakho kwelona qondo likhulu.
Ukusika ngokuqhubekayo ngokutya okuzenzekelayo.
Ilungele ukusika i-textile yobugcisa.
Umsebenzi onamandla udala ukuguquguquka okungapheliyo.
Itekhnoloji yoshicilelo lwe-ink-jet engaqhagamshelwanga nayo (ukhetho).
Ubungakanani betafile enkulu yokusebenza inokwenziwa ngokwezifiso.
Umzobi weGalvo Laser kunye noMphawu 40
Ilungele ukuphawula okanye ukwanga-ukusika izixhobo zokusebenza ezingezizo ezentsimbi njengefilimu yokudlulisa ubushushu.
I-3D Dynamic focus yophula imida yemathiriyeli.
Ukumakishwa kwelaser okubhabhayo ukwakha umgca wendibano (ukhetho).
Ukubonisana kwangaphambili kokuthengisa kubalulekile ukuze ufunde ngeemfuno zakho ezithile.Lowo ukufanelayo yeyona ilungileyo!
Oomatshini belaser beMimoWork bagubungela iimfuno ezahlukeneyo kwiinkalo ezahlukeneyo.
Iinketho ezongezelelweyo kunye ne-multifunctional laser ziyafumaneka kwiimfuno ezahlukeneyo ezilungiselelweyo.
Inkonzo yeMimoWork idlala indima ephambili ekuqinisekiseni ukusebenza okuthembekileyo koomatshini bethu belaser ukuze umthengi wethu ahlale eziva eyedwa.
Iqela leNkonzo yeMimoWork lihlala libeka iimfuno zabathengi bethu ngaphezu kwezethu ukusuka kwinqanaba lokuqala lovavanyo lwemathiriyeli ukuya ekuqaleni kwenkqubo yelaser.
Jonga zonke iiMathiriyeli
Kwiminyaka engama-20, iMimoWork inikezelwe ukutyhala
imida yetekhnoloji yelaser kunye neshishini elitsha
Jonga zonke iiNkqubo
Ukusika iPatch ngeMimoWork
I-Laser Cut Patch Style Iimpahla zakho zeFashion ngeLaser Cut patches Zingasetyenziswa phantse ngayo nantoni na oza kuyibona, kubandakanya ijini, iidyasi, izikipa, izikipa, izihlangu, oobhaka, kunye namaqweqwe efowuni.Ba...
Yenze kube kanye ngeLaser PCB Ekroliweyo
Yenze kube kanye nge-Laser PCB Etching PCB, umthwali wesiseko we-IC (Isekethe eDityanisiweyo), isebenzisa imikhondo yokuqhuba ukufikelela kuqhagamshelo lwesekethe phakathi kwamacandelo e-elektroniki.Kutheni ilikhadi lesekethe eliprintiweyo?iCondu...
Umkroli weLaser VS Laser Cutter
Yintoni eyenza i-laser engraver yahluke kwi-laser cutter? Indlela yokukhetha umatshini we-laser wokusika kunye nokukrola? Ukuba unemibuzo enjalo, mhlawumbi ucinga ngokutyala imali kwi-laser...
Amanyathelo okungqina umkhenkce kwiNkqubo yeLaser yeCO2 eBusika
Isishwankathelo: Eli nqaku lichaza ubukhulu becala imfuneko yokugcinwa komatshini wokusika i-laser ebusika, imigaqo esisiseko kunye neendlela zokugcinwa, indlela yokukhetha i-antifreeze yomatshini wokusika we-laser, kunye nemibandela efuna ...
Fumana iTekhnoloji yeLaser ngeMimoWork
uyafuna ukwazi ngakumbi malunga nezibane zangoku?
Emva koko ubhalisele kwincwadana yethu.
©Copyright - 2010-2021 : Onke Amalungelo Agciniwe. , , , , , , ,